Brazil 2020 စုဆောင်းရေးခရီးစဉ် - ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ Master's Program - MIU ရှိကွန်ပျူတာပညာရှင်အစီအစဉ်
ဘရာဇီး 2020 ခန့်အပ်ရေးခရီးစဉ်
(အောက်တွင်ကြည့်ပါ - Florianopolis, Belo Horizonte နှင့် Brasilia event များဖျက်သိမ်းလိုက်။ )
မတ် ၉ ရက်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မတ်လ ၁၉ ရက် (အခမဲ့လက်မှတ်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ)
Maharishi အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ Computer Professionals Master's Program (“ ComPro”) 2900 93 ကတည်းက 1996 လူအမျိုးမျိုးထံမှဘွဲ့ရများနှင့်ထက်ပို 1000 လက်ရှိကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ, United States မှာအများဆုံး, ထူးခြားတဲ့လူကြိုက်များနှင့်အောင်မြင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတစ်ဦးဘွဲ့ရအဆင့်၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များပေါင်းစပ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအတွက်မဟာဘွဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ paid Intern များကိုအတူ။
မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များနှင့် applications များ၏ထောင်ပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်ငါတို့သည်ဘရာဇီးကနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခံယူ, Greg Guthrie, Ph.D ဘွဲ့ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံ, ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာမဟာဌာနမှူး, နှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခများနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာ၏ကျောင်း, ဒင်းဂုဏ်ထူးဆောင် Elaine Guthrie ခရီးသွားပါလိမ့်မည် ရီယိုဒီဂျနရို, Sao Paulo, Campinas, Porto Alegre (ဖျက်သိမ်းမှု - Florianopolis, Belo Horizonte နှင့် ဘရာဇီးလ် မှ မတ်လ 9, 12 မှမတ်လ 2020 တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်အလားအလာကျောင်းသားများနှင့်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်။
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံကျောင်းသားများနှင့်ဘွဲ့ရရှိထားသောဘွဲ့ရများအားစီစဉ်ထားသည့်ဟောပြောပွဲများနှင့်အစည်းအဝေးများတွင် Guthrie နှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖိတ်ကြားသည် အောက်တွင်.
ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ ဗွီဒီယို ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဘရာဇီးကျောင်းသားတစ် ဦး နှင့်အတူ။
ရီယိုဒီဂျနရို: တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၉ ရက်18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: VTEX ရီယိုဒီဂျနေရို, Centro Empresarial Botafogo, 300, 3º Andar - Botafogo, ရီယိုဒီဂျနေရို - RJ, 22250-040 ။ ဖုန်းနံပါတ်: (11) 98270.2678 ။ သီးသန့် အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်ရန်။
ဆောပိုလို: အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၁၀ ရက်၊18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: VTEX ဆော်ပေါ်လို, Av ။ brg ။ Faria Lima, 4440, Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04538-132 ဖုန်းနံပါတ်: (11) 98270.2678 ။ သီးသန့် အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်ရန်။
Campinasဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၁၁ ရက်18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: Castelo ဖန်တီးမှုနေရာ, Av João Erbolato, 364 - Jardim Chapadão, Campinas - SP, 13070-070 ။ ဖုန်းနံပါတ်: (11) 98270.2678 ။ သီးသန့် အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်ရန်။
Porto Alegre: ကြာသပတေးနေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၁၂ ရက်၊18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: ပန်းပွင့် PORTIO ALEGRE, အစိမ်းရောင်ရုံး Caixeiros, R. Mostardeiro, 777, Moinhos က de Vento, Porto Alegre - RS, 90430-001, ဖုန်းနံပါတ် (11) 98270.2678 ။ သီးသန့် အခမဲ့လက်မှတ် ဒီဖြစ်ရပ်ရန်။
Florianópolis: တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၉ ရက်18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: သက်ရောက်မှု HUB FLORIPA PRIMAVERA, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia - ACATE, Passeio Primavera ။ SC 401, ကီလိုမီတာ 4, Rodovia ဟိုဆေးကားလို့စ် Daux, 4150. Salas 01 အီး 02. , Saco Grande ။ Florianópolis / SC ။ CEP 88032-005, ဖုန်း: (11) 98270.2678 ။ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ (မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒီအဖြစ်အပျက်ကို live video event နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ )
Belo အလျားလိုက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၁၈ ရက်၊18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: Impact Hub Belo Horizonte, Av ။ Getúlio Vargas, 1492 - 2º Andar, Savassi, Belo Horizonte - MG, 30112-021 ။ ဖုန်းနံပါတ်: (11) 98270.2678 ။ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ (မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒီအဖြစ်အပျက်ကို live video event နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ )
Brasiliaကြာသပတေးနေ့၊ မတ်လ ၁၉ ရက်၊18: 30 - 21: 30): တည်နေရာ: LOGO ACELERADORA, SIBS Quadra 02 Conjunto B သည် 13/14, Núcleo Bandeirante - DF, Brasília, DF 70297-400, ဖုန်းနံပါတ်: (11) 98270.2678 ။ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ (မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဒီအဖြစ်အပျက်ကို live video event နဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ )
မေးခွန်းများကိုနှင့်ဤခရီးစဉ်အပေါ်မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ ဒီမှာ သို့မဟုတ်ဖုန်း SP (11) 98270.2678 ။
မှတ်စု: ဒီဖြစ်ရပ်များသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဘာသာပြန်ဆိုမှုမရှိပါ။